Kuvakwa kwenzvimbo yeMcCain kwatanga muRussia.
Nzvimbo yekugadzira mbatatisi ichavhurwa mudunhu reTula. Musi waMay 31, chakaiswa dombo rekufananidzira muUzlovaya SEZ mukuremekedza kutanga kwekuvakwa kweMcCain mbatatisi yekugadzira mbatatisi.
Managing Director kuMcCain Foods Russia
Mhemberero iyi yakapindwa naGavhuna Alexey Dyumin, Mumiriri weCanada kuRussia Alison Leclair uye Mutungamiri weMcCain Kambani yeEurope, Central Asia ne Africa Erwin Pardon.
Alexey Dyumin akataura kuti chirongwa chikuru chekudyara chekambani yeCanada "McCain Foods Rus" chakatangwa nhasi. Munguva pfupi iri kutevera, chirimwa chemazuvano chekugadzira mbatatisi chichaonekwa pano. Hwehuwandu hwekudyara vhoriyamu hunopfuura mabhirioni gumi nemaviri emabhuru. Iyo kambani ichagadzira nezve mazana maviri emabasa. Chii chichava chakanakira pasocial mutemo wedunhu. Vakatiwo: “Izvi zvinoreva kuti dunhu redu rine mamiriro ekudyara akanaka, tinotsigira varimi, uye mabhizinesi anovimba nezviremera zvematunhu. Kwatiri, vese varairidzi vanouya mudunhu vanova chikamu chemhuri yedu yakakura yedunhu. Kugamuchirwa kumhuri yedu! Tigashire kumatunhu eTula! ”, - Alexey Dyumin akasimbisa.
Mumiriri weCanada kuRussia Alison Leclaye akati chirongwa ichi chakaitwa nekambani "McCain" mudunhu reTula, chichagadzira mudunhu kwete chete chigadzirwa chitsva chekugadzira mbatatisi, asi zvakare kuvhura mabasa matsva pamwe nekubatana nevarimi veTula.
Erwin Pardon akacherekedza kuti chirimwa, chakavakwa mudunhu reTula, chichava imwe yemabhizimusi emazuva ano uye ane hushamwari ekambani iyi. Dunhu iri rine vashandi vazhinji vane hunyanzvi, zvivakwa zvakagadzirwa zvakanaka. Pachave nemikana yekubatana nevarimi veTula.
Alison Leclair naErwin Pardon vakatenda Alexey Dyumin pamwe nehurumende yedunhu nerutsigiro rwavo.
Musangano uzere wevatori venhau wekuiswa kwedombo reMcCain chirimwa muRussia tarisa vhidhiyo.
Tarisa Justin Timberlake's 'Ndicheme Rwizi' Huya kuHupenyu muMesmerizing Dhanzi
Japan Tariff Kuderedzwa KweUS Mbatatisi - Fries Zvino Pinda Mutero Mahara